भिडमा खसेको गोरुलाई राम राम भन्ने बाहेक केहि छैन: संजय चौधरी - नेपालिक्स
माघ ९ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि अहिले नेपाली काँग्रेस– समाजबादी पार्टी तथा नेकपा र राजपा बिचको गठबन्धन भई चुनावी अभियानमा नेताहरु कार्य क्षेत्रमा घुमिरहेका छन् । चुनाव प्रचारको क्रममा समाजवादी पार्टी र नेपाली काँग्रेसले नेकपा– राजपा बिचको गठबन्धनलाई अबैध भई प्रचार गरिरहेको विषयमा राजपाका केन्द्रिय सदस्य संजय कुमार चौधरीले विरोध जनाउनु भएको छ ।
माघ ९ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी कस्तो चलिरहेको छ ?
– राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी अहिले युद्धस्तरमा भईरहेको छ । नेकपा र राजपा गठबन्धनको उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउनको लागि अहिले केन्द्र देखि प्रदेश सम्मका शिर्ष नेताहरु आफ्ना क्षेत्रमा अभियानलाई तिब्र पार्नुभएको छ । यो चुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर नेतृत्व पंक्ति अहिले जिल्ला– जिल्ला पुगेर गठबन्धनका पक्षमा मत दिने अभियान थालनुभएको छ ।
गठबन्धनका विषयमा बाहिर नाकारात्मक प्रचार समेत भईरहेको छ । तपाई के भन्नु हुन्छ ?
–विपक्षीहरुले यो गठबन्धनका विरुद्धमा नाकारात्मक प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । आम जनता र मतदाताहरु यो गठबन्धनलाई स्वभाविक लिईरहेको अवस्था छ । वर्तमान नेकपा र राजपाको गठबन्धन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि मात्र रहेको छ । यसलाई अन्यथा नलिन समेत आग्रह गरिन्छ ।
कुनै बेला राजपा र समाजवादी पार्टी मधेशीको अधिकारका लागि संगै सडकमा रहेका थिए । अहिले दुबै दल तत्कालिन परस्पर विरोधी मानिने दल संग चुनावी तालमेल गरेको छ । तपाई यसलाई कुन रुपमा लिनु हुन्छ ?
– हेर्नुस, यो चुनावी तालमेल मात्र हो । पार्टी एकता होइन। चुनावी तालमेल र पार्टी एकता फरक विषय रहेको छ । चुनावमा आफ्ना पक्षमा परिणाम ल्याउनको लागि राजपा र नेकपा बिचको चुनावी तालमेललाई अन्यथा लिनु हुदैन ।तर, यसमा चाहि दूरगामी सोच र सहि चिन्तन नभएका समाजबादी पार्टीको कारण यो गठबन्धन भएको हो । राजपाले विगतमा समाजवादी पार्टी संग पार्टीगत एकता गर्न हदै सम्म प्रयास गरेपनि उपेन्द्र यादव जीको अहंकारका कारण मधेशधरातल भएका यी दुबै पार्टी बिच एकता हुने सकेन । उपेन्द्र यादवले अनेकौ पटक मधेशी जनता संग बैमानी गरी सत्ताको लोभमा फसेका विदितै छ । अहिले पनि करिब २ वर्ष सत्ताको स्वाद चाखेर पनि दुई बुँदे सहमती अनुसार संबिधान संशोधनको विषयमा एक शब्द पनि नबोल्ने उपेन्द्र यादवले नेकपाले मन्त्रालय परिवर्तन तथा प्रदेश प्रमुख हेरफेर गरेपनि केहि गर्न नसेको अवस्था छ । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकारबाट हटाउन लागेपछि आफ्नो इज्जत जोगाउन सरकार छाडेका हुन । विगतमा बन्दुकको नोकमा संबिधान जारी गरेका पार्टी संग गठबन्धन गरेर उपेन्द्र यादवले फेरी मधेशी जनतालाई धोका दिएका हुन ।
राजपाका माननीयहरु क्रस भोटिङ गर्ने हल्ला चलिरहेको छ ? तपाई के भन्नु हुन्छ ?
– यो वाहियात कुरो हो । विपक्षीले राजपालाई बदनाम गर्न हदै सम्म प्रपन्च गरिरहेका छन् । निभिन लागेको दियो बढी उज्यालो दिन्छ । त्यस्तै हतास मानसिकताका समाजवादी पार्टी र नेपाली काँग्रेसका गठबन्धनका नेताहरुलाई आफ्नो हैसियत र क्षमता थाहै नभए पछि अर्थहिन कुरा गरि प्रचारमा लागेका हुन ।
यो चुनाव पछिको परिणामने प्रदेश नं. २ को सरकारमा यसको असर पर्छ की ?
– प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन दुईटै फरक कुरा हुन । तर, समाजवादी पार्टीले आफ्नो चालमा सुधार नल्याए मधेशी जनता संग यस्तै धोकाधारी गरिरहयो भन्ने बाध्य भई प्रदेश नं. २ का सरकार पनि परिवर्तन हुन सक्छ । यो गठबन्धनको सरकार भएपनि एकआपसमा अन्तरघुलन नगरी मनोमालिनी गरी सरकार चल्दैन ।
यो सरकारले उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी नगरे पछि अहिले सदन नै अबरुद्ध छ ? किन भुक्तानी नगरेको होला ?
– किनभने उपभोक्ता समितिले गरेको कामको मूल्यांकन समेत भईसकेको अवस्थामा अहिले सम्म उनिहरुलाई न्यायोचित भुक्तानी दिनुपर्छ । भुक्तानी नगरेको खण्डमा प्रदेश सरकारले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । मुख्यमन्त्रीले गरेको काम अर्थमन्त्रीलाई नपच्ने र अर्थ मन्त्रीले गरेको काम मुख्यमन्त्रीलाई नपच्ने अवस्थामा दुई जना गोरुको जुधाईमा बाछोको ज्यान जोखिममा परे जस्तै अहिले यो उपभोक्ताहरुले गरेको कामको भुक्तानी नदिएको देखिन्छ । समयमा उपभोक्ता समितिले गरेको कामको भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
अन्तमा यो नेपाली काँग्रेस र समाजवादी पार्टी बिचको चुनावी गठबन्धनलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– यो गठबन्धन नै भिडमा खसेको गोरुलाई राम राम भन्नु बाहेक केहि छैन भन्ने जस्तै हो । किनभने राष्ट्रिय सभामा नेकपा र राजपाको गठबन्धनमा एक सय ९४ सहति स्पष्ट बहुमत देखिन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश २ को गणित नेकपाः प्रदेश सभा ३२, स्थानीय तह ८३, राजपाः प्रदेश सभा २५, स्थानीय तह ४४, समाजवादीः प्रदेश सभा ३०, स्थानीय तह ५२, नेपाली काँग्रेसः प्रदेश सभा १९ स्थानीय तह ८१, नेपाली जनता दल ः स्थानीय तह २, स्वतन्त्र प्रदेश सभा १ रहेको छ । यो गणितको हिसावले पनि नेपाली काँग्रेस र समाजवादीको गठबन्धनको हार निस्चित छन् । राजपा र बामको जीत सुनिश्चित छन् ।
Previous दिन दहाडै हत्या हुँदैछ, हामी मुक दर्शक भएका छौ: मुख्यमंत्री राउत
Next मधेस सहीदलाई २५ लाख सहयोग देखि ११७ जनाको सहादत…